Ahoana ny fomba ahazoana $ 1000 / m amin'ny marketing marketing: 6 Dingana tsotra - Learn Expert Blogging
Ahoana ny fomba ahazoana $ 1000 / m amin'ny marketing marketing: 6 Dingana tsotra
Ny marketing Affiliate dia iray amin'ireo indostria mampiroborobo indrindra eo amin'ny tontolon'ny internet. Ny olona dia mitady zavatra be dia be, torolàlana manampy amin'ny Internet isaky ny segondra. Tsy an'arivony io fikarohana io fa an-tapitrisany.
Ho takalony, mitsidika tranonkala iray izy ireo mba hananany vahaolana amin'ny olana. Tamin'ny fotoana, rehefa manoratra torolàlana manampy amin'ny tranokala, ny mpanoratra dia manome soso-kevitra ny sasany amin'ireo vahaolana mety indrindra ho an'ilay olana amin'ny rohy miasa.
Vokatr'izany, raha mividy ny mpampiasa, mahazo komisiona ny mpanoratra. Amin'ny ankapobeny ny komisiona dia mety misy eo anelanelany 1% ny 60% arakaraka ny karazana vokatra arosonao.
Misy tranokala maromaro mandray mpitsidika an-tapitrisany isam-bolana. Ary ny taham-panovana amin'ny ankapobeny dia mijanona manodidina 5%. ankehitriny, azonao atao ny manombatombana mora foana raha misy iray amin'ireo tranonkala mandray 1 mpitsidika tranonkala iray tapitrisa isam-bolana, ohatrinona ny vola azony amin'ny marketing marketing.
Ny mpitsidika sasany koa mamaky: Sarotra ve ny mahazo vola amin'ny Marketing Affiliate?
Torolàlana isaky ny dingana hamoronana tranokala / bilaogy mpiara-miasa
Mividy domains sy fampiantranoana
Mametraka ny bilaoginao
Fametrahana permalink sy fanoratana ny bilaoginao voalohany
Mitady ny programa afiliana mahasoa indrindra
Manatevin-daharana ireo programa afiliana
Manoratra lahatsoratra bilaogy manampy
Fampiroboroboana ny lahatsoratra
Amin'ity torolàlana manampy ity, hampianarinay anao ny fomba fanaovana 1000+ dolara amin'ny dingana tsotra enina amin'ny marketing marketing.
Mividy sehatra sy fampiantranoana: Fametrahana ny bilaoginao
Mitady ny lohahevitra mahasoa indrindra: Ny isanjaton'ny komisiona ambony
Midira amin'ny programa Affiliate: Amazon, ShareAsale, Commission Junction
Lahatsoratra bilaogy: Fampidirana ny atiny Post
Manao SEO: Ao amin'ny pejy, Pejy tsy mandeha
Fampiroboroboana ireo lahatsoratra bilaogy: Instagram, Twitter, Facebook
Azonao atao ny manao marketing Affiliate na dia amin'ny alalàn'ny YOUTUBE, ary amin'ny sehatra samihafa fa hahazoana vola be dia be izay mitombo tsy tapaka. Manoro hevitra aho fa tsy maintsy manana ny bilaoginao na tranonkalanao manokana ianao. Izany dia mahatonga ny goavambe tsy eritreretinao mihitsy.
Amin'ny fanombohan'ny dianao, ilaina ny fananana mividy anarana dominika sy fampiantranoana. indraindray, manao diso isika ary koa amin'ny fividianana lafo. Saingy eto aho dia te-hanoro anao ny sasany amin'ireo tranonkala fampiantranoana tsara indrindra amin'ny fiantombohan'ny dianao. Izao dia izao, manolotra fihenam-bidy tsara izy ireo izay manaporofo fa tena mety aminao. Azonao atao ny mampiasa ny kaody coupon ary mividy amin'ny alàlanay mba hahazoana tombony amin'ny vidiny ambany.
Ny anaran'ny sehatra dia mety misy ary tokony hisy izany. Tokony ho tokana izy io izay azo raisina ho toy ny marika ary manolotra hevitra aho hividy teboka (.)com fa tsy ny hafa. Manampy anao hahatratra tanjona iraisam-pirenena izany.
Raha vantany vao mividy fampiantranoana Internet ianao ary fotoana izao hampifandraisana azy roa. Raha mividy azy amin'ny orinasa mpampiantrano sy sehatra iray ianao dia azonao atao amin'ny tsindry tokana raha tsy izany dia mila manolo ny adiresy IP mpizara ianao hahatonga ny bilaoginao ho velona..
Ao amin'ity lahatsoratra ity, Ity ny fampianarana hampifandray ny Webhosting amin'ny sehatra Godaddy.
Raha vantany vao miditra ao amin'ny dashboard WordPress anao ianao. ny dingana voalohany dia ny fametrahana ny lohahevitry ny tranokalanao. Manoro hatrany ny zavatra maivana indrindra aho fa ny lohahevitra Astra.
Ny sasany amin'ireo fiasa dia maimaim-poana raha ny hafa kosa premium. Ho an'ny marketing Affiliate maimaimpoana maimaimpoana dia miasa tanteraka fa tsy mila mandeha mividy premium ianao.
Zavatra hafa, Manoro hevitra anao aho ho an'ny Affiliate tsara marketing ny atiny no zava-dehibe indrindra fa tsy ny famoronana tranokala. ENY, tokony ho tsotra, mamaky haingana dia haingana fa tsy misy filàna fanaingoana toy izany, tsara tarehy. Ny antony satria miangona ao amin'ny Google ny atiny fa tsy famolavolana. Ny milina fikarohana toa an'i Google dia miahy mandrakariva ny atiny izay ezahina fatratra hanolotra torolàlana manampy ho an'ny mpampiasa.
Permalinks dia ao anatin'ny SEO ka tsy mifidy daty no anolorako ny toerana manaraka, izay nataoko ary aseho amin'ny sary. VOALOHANY, mifidiana sokajy aorian'izay ny Url.
Zava-dehibe ny mitady fotoana mety ahazoana tahan'ny komisiona ary mitady vokatra ny olona. Ny orinasa lehibe rehetra dia manana programa afiliana. Miarahaba ny tompona tranonkala izy ireo hanatevin-daharana azy ireo programa ary hampiroborobo ny vokatra vokariny. Ireo mpanoratra tranonkala dia manoratra ny famerenana ny vokatra manome ny heviny marina izay maharesy lahatra marina ireo mpamaky tranonkala.
Tranonkala malaza toa an'i Amazon, CJ, mizara varotra, radius fiantraikany dia ireo tranonkala malaza miasa toy ny tafon-trano iray ho an'ny programa afiliana rehetra.
Aorian'ny fidirana amin'ny tranokalan'izy ireo, hahita programa afiliana isan-karazany an'arivony ianao hanatevin-daharana ny tahan'ny fahazoan-dàlana amin'ny zava-bitan'izy ireo, fomba hampiroboroboana ny vokariny, sns.
Ary niresaka taminao aho tamin'ny dingana voalohany tamin'ny lahatsoratra fa afaka manome andraikitra betsaka ianao 60% arakaraka ny karazana vokatra arosonao.
Alohan'ny hidiranao amin'ny programa dia manoro anao aho mba hikarakara ny tahan'ny kaomisionanao. Ohatra, ny vokatra elektronika amin'ny ankapobeny dia manana ny taha ambany indrindra amin'ny kaomisiona. Raha izany dia, raha mampiroborobo ny vokatra elektronika toy ny fahitalavitra ianao, kojakoja amin'ny solosaina, hahazo komisiona kely ianao. kosa, ny vokatra an-trano sy an-dakozia dia manana ny komisiona ambony indrindra. Eritrereto hoe mampiroborobo ny lafaoro misy mikraoba aho izay mety mihoatra ny vidiny $100. Raha ny komisiona amazonany izao dia 7% dia azonao atao ny maka sary an-tsaina hoe ohatrinona ny karama azonao aorian'ny fivarotana.
Azonao atao ny mamaky ny fanadihadianay amin'ny Marketing amin'ny Affiliate Amazon
Ho fanampin'izany, ianao dia tokony hikarakara izay fomba fampiroboroboana - fanomezana tapakila anao, sora-baventy samy hafa, tolotra fihenam-bidy, sns.
Ho an'ny marketing marketing, tokony soratanao ny karazana atiny tadiavin'ny mpampiasa.
Ianao no nanoratra an'io lahatsoratra io izay efa nosoratan'ireo tranonkala an-jatony. Ny fanombohana vaovao an'io dia tsy misy ilana azy ho anao na dia manan-jo hanana atiny mahasoa mahavariana aza ianao. Tsy hanana laharana voalohany ianao.
Ho an'ity, tsy maintsy mandeha mikaroka fikarohana teny filamatra mety ianao. Karazan-fikarohana sy lahatsoratra manampy lahatsoratra izay tsy mbola nisy nanoratra teo aloha. Izaho dia mampiasa fitaovana amin'ny fanaovana marketing marketing. Ny fitaovana fanalahidy tiako indrindra dia Semrush. Mamela ahy hahita ireo teny lakilen'ny fifaninanana ambany mahasoa indrindra. Lisitry ny teny lakilen'ny fifaninanana ambany izay tsy nisy olona na tranonkala vitsivitsy monja nanoratra lahatsoratra momba azy.
Tsarovy, ity dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra. Aza adino ity dingana ity raha tsy izany dia tsy misy ilana azy ny fikelezanao aina rehetra. ny marina, Izaho aza mandany 2 ny 3 herinandro manao lisitra feno 20 + teny fanalahidy lava rambo lava amin'ny fifaninanana ambany.
Afaka manoratra karazana fampahalalana atiny telo ianao amin'ny ankapobeny, ara-barotra, ary ny fitetezana.
Amin'ireo karazana atiny telo ireo, ho hitanao ny mifaninana indrindra amin'ny atiny karazana varotra raha ny ambany indrindra amin'ny fampahalalana.
Manoro hevitra anao aho hanoratra atiny misy fampahalalana fa tsy hifantoka amin'ny resaka ara-barotra ny antony satria efa manomboka andro ianao. Sarotra ny laharana amin'ny fitsamborana mivantana amin'ny fifaninanana.
Ataovy mazava kokoa, raha misy te hamaky lahatsoratra- “ny fomba fanadiovana lafaoro microwave ao an-trano”. Ity karazana lahatsoratra ity dia lahatsoratra fampahalalana. Mandritra ny torolàlana feno fanampiana anao, azonao atao ny manolotra vokatra iray na roa ampiasainao ho anao ary manoro hevitra azy ireo hividy. Ho takalony, hahazo komisiona ianao.
Tokony hanana kaonty lohateny mety ianao, torolàlana tsikelikely miaraka amin'ny sary. Arakaraka ny isan'ny mpampiasa mandany fotoana amin'ny tranokalanao no famantarana tsara kokoa hahatratrarana toerana ambony.
SEO dia manoratra atiny mahasoa izay takatry ny Google sy ny motera fikarohana hafa. Azonao atao ny mandray ny fanampian'ny Yoast, Plugins RankMath WordPress hanatsara ny lahatsoratrao izay manampy anao hanana laharam-pahamehana haingana.
Ho fanampin'izany, SEO ivelan'ny pejy koa dia mitana andraikitra. Backlinks dia ampahany aminy ihany koa. Fa amin'izao andro izao, azonao atao ny mametraka ny tranokalanao miorina amin'ny atiny tokana fa tsy mifantoka amin'ny SEO ivelan'ny pejy.
Ahoana no hanadinoanao ny media sosialy. Mahazo mpitsidika an-tapitrisany isan'andro izy ireo. Afaka mampiasa Facebook ianao, Instagram, youtube Twitter hizara ny hafatrao.
Vao maraina, mety ho sarotra ny mahazo tsindry voalohany fa raha tsy mijanona amin'ny famoahana ny lahatsoratrao amin'ny tranokalanao sy amin'ny sosialy ianao dia havaozina. Tsy hisy fotoana intsony handraisana mpitsidika tranokala ary manomboka amin'ny marketing marketing ianao no mahazo vola.
Miaraka amin'ireo 7 dingana tsotra hanombohana ny dianao. afaka milahatra ambony mora foana ianao raha miasa tsara ary manam-paharetana amin'ny atiny mahaliana indrindra izay miverimberina miverina ao amin'ny tranonkalanao ny mpampiasa.
Ny hany sisa tavela aminao dia –miandry ianao hanomboka. Izy io dia karazana fidiram-bola tsy mitongilana izay mihalehibe nefa tsy mihena ny fotoana. Tsy azonao atao ambanin-javatra ny fidiram-bola miaraka amin'ny loharano hafa dia ny mahazo vola eo an-toerana na amin'ny internet.
Misy tantara fahombiazana marobe amin'ny Internet. Afaka mikaroka ao amin'ny Google ianao. Vao maraina, olon-tsotra izy ireo fa amin'ny alàlan'ny marketing marketing.
Previous PostNy marketing amin'ny Affiliate Amazon ve mendrika izany?